Ihe ị ga-ahụ na Limoges | Akụkọ njem
Ihe ị ga-ahụ na Limoges
Na mpaghara nke Limousin, France, enwere obodo mara mma nke mba ụwa matara maka ịdị mma na ịma mma nke poselin ya: Limoji. Ọ bụ obodo nwere akụkọ ihe mere eme na nka nke akụ ya na ebe nlegharị anya ya gabigara mma ya na poselin a ma ama.
Limoges nwere saịtị na-adọrọ adọrọ dị ka ọdụ ụgbọ oloko n'ezie, ogige ntụrụndụ na ubi mara mma, na ebe a na-eli ozu pụrụ iche na Europe. Anyị maara taa ihe anyị ga -ahụ na Limoges?
2 Ihe ị ga-ahụ na Limoges
Obodo bu isi obodo mpaghara Limousin, mpaghara French mbụ, ọ dịkwa n'akụkụ mmiri Vienne, n'ebe ndịda site na mba. Ọ bụ ezie na ọ bụ ama maka poselin na akwụkwọ ya n'oge French Middle Ages, na mgbakwunye bụ akụkụ nke Camino de Santiago a ma ama, n'oge a, ọ bụghị n'okporo ụzọ njem nlegharị anya niile. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bara uru ileta ya.
Eji ụgbọ oloko jikọọ obodo ahụ nke ọma na France ndị ọzọ ma nwee ọdụ ụgbọ elu mba ụwa. Ọ bụ ebe dị mma ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iji obere njem gaa na ndịda ọdịda anyanwụ France ebe ọ dị na ọkara n'etiti ọdụ ụgbọ mmiri La Rochelle na mpaghara mmanya na-eto eto nke Bordeaux.
Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị nwere mmasị na France ma chọọ ịgbanahụ igwe mmadụ, Limoges zuru oke. Bụ dị ihe dị ka kilomita 400 ndịda Paris, n'ime obi nke a na-akpọbu Limousin ma taa a na-akpọ New Aquitaine, ya mere ọnụ ahịa dị ala na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie nwere ndị njem nleta ole na ole.
Anyị kwuru n'elu na ọ dị mkpa na Middle Ages na ọ bụ n'ihi na, n'akụkụ ụfọdụ, ọ na-ekere òkè na ndụ Richard the Lionheart, eze England a ma ama, na akụkụ French, nke e liri na Katidral nke Rouen, na Normandy. . Ebe a taa na Limoges ị nwere ike iso ụzọ Ricardo Corazón de León nke na-aga kilomita 180 na-emetụ saịtị 19 dị mkpa, nnukwu ụlọ na katidral nke obodo gụnyere.
Su akụkọ ihe mere eme okpu agha, doro anya. Ndị ụlọ mgbe ochie Ọ dị ịtụnanya, ụlọ ndị ahụ na -ejigide elu ụlọ ha, ọ bụkwa kaadị ozi kacha mma n'ime ime obodo French ị ga -ahụ. Ọ dị mma karịa ihe ị na -ahụ na Colmar, Strasbourg ma ọ bụ Le Marais. Ọtụtụ ụlọ adịla narị afọ.
Okporo ámá nke ị na-ekwesịghị ileghara bụ Rue de la Boucherie, na Le Quartier de La Boucherie. Na akụkọ ihe mere eme ọ bụ n'okporo ámá ebe ndị na -egbu anụ obodo ahụ bi ọ dịkwa ka ọ kwụsịtụrụ n'oge. Okporo ụzọ ahụ dị warara ma dịkwa mkpọtụ, ụlọ pere mpe ma zoro n'etiti ha bụ Ụlọ ụka Saint Aurelien, dị oké ọnụ ahịa, ya na onyinyo nke onye nlekọta senti nke anụ anụ. N'ime ya ka ihe ncheta ya dị, nke nwere ọtụtụ ọla edo.
Ihe nke abụọ na nleta Limoges bụ ee ma ọ bụ ee maka poselin ya. N'ime narị afọ nke XNUMX, mmepụta ihe na -esi na mpaghara a na -akụ nke ọma ruo taa 50% nke poselin French na-eme ebe a. Iji mụtakwuo e nwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na etiti, nke nwere ihe karịrị puku iri na abụọ na nchịkọta. Ọ gbasara Adrien Dubouche National Museum. Ụlọ ihe ngosi nka ọzọ ị nwere ike ịga bụ Ụlọ ọrụ nka na nka, n'ala ala katidral obodo.
Ọzọ bụ Limoges Resistance Museum, nke mepere na 1989 na etiti akụkọ ihe mere eme. O nwere nchịkọta ngwa ọgụ, ihe na akwụkwọ izizi na -ekwu maka ya iguzogide mpaghara nke ndị Nazi n'oge Agha Ụwa nke Abụọ. Mbanye bụ n'efu, ọ na-emeghe kwa ụbọchị ma e wezụga ụtụtụ Tuzdee na Sunday n'oge ụfọdụ n'afọ.
Ụlọ ihe ngosi nka ndị ọzọ? Ọ bụ Ụlọ ihe ngosi nka nke Fine, na ihe mara XNUMXth narị afọ ụlọ, bụbu bishọp n'obí, na Ihe ngosi nka nke Casseaux Porcelain, malitere na 1904, Ụlọ ihe nkiri Haviland mekwara nke poselin ma ji achọ na mara nri abalị, na Ụlọ omenala nke onye na -egbu anụ, site na narị afọ nke XNUMX na ọmarịcha ihe ngosi nka nke bụ Ụlọ ihe nkiri Tapestry.
Anyị kwurịtara n'elu na Limoges nwekwara N'ezie nnukwu nnukwu ọdụ ụgbọ oloko. Gare de Limoges - Bénedictins Ọ bụ nke na -apụta na azụmahịa Chanel nke Audrey Tautou na -ese. Ọ nwere elekere mara mma na windo iko nwere eserese art-nouveau na ọ bụ naanị nkeji iri na ise ka ọ na-aga site na etiti obodo. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ị bịarutere n'ụgbọ oloko.
Enwere ọtụtụ saịtị nketa ịmara, dịka ọmụmaatụ Fountain des Barres, n'etiti etiti gbara ụlọ ochie na ụlọ ndị mara mma gburugburu Ọwara La Régle, n'ezie a netwọk nke tunnels na-agafe n'okpuru ochie obodo na ụfọdụ malitere site n'oge ndị Rom, n'agbanyeghị na ọtụtụ n'ime ha wuru gburugburu afọ 1000 na narị afọ nke XNUMX.
Ha nwere ihe owuwu dị mgbagwoju anya dịka ụfọdụ nwere ọkwa abụọ. A na-eji ha maka nchekwa na nke a ga-eleta, dịka ọmụmaatụ, bụbu okpuru ulo abbey. Ọ na-emeghe naanị maka njegharị eduzi ahaziri site na Limoges Tourist Office na njem ọ bụla na-ewe ọkara elekere. Saịtị ọzọ akwadoro bụ Ụlọ Nzukọ Alaeze malitere na 1883 e wukwara ya n’ebe e nwere ọgbakọ ochie.
Ụlọ Nzukọ obodo sitere n'ike mmụọ nsọ nwanne ya nwanyị Parisi, o nwere granite na ntọala na nkume nzu na mgbidi ya, na-ejikọta ụdị Renaissance na Louis XIII. Enwere ihe nrite seramiiki anọ na-anọchi anya ọnụ ọgụgụ obodo anọ. Ejikwa mosaics mara mma chọọ isi iyi ya mma ma wuo ya n'etiti 1982 na 1893 na granite pink, bronze na poselin.
Ebe nlegharị anya ọzọ bụ Chapel nke Saint Aurelian nke anyị kwuru maka ya obere oge, wuru na 1471. Enwekwara Pavilion du Verdurier, Ụlọ ihe mkpuchi anụ kpọnwụrụ akpọnwụ nke si Argentina bịa n'oge Agha Ụwa Mbụ. Emere ya site na simenti siri ike kpuchie ya na taịl nile nke aja. Ewubere ya na 1919 iji kwụsị ikike nke ezinụlọ ndị na-egbu anụ na Rue de la Boucherie. Taa ọ na-arụ ọrụ dị ka ebe ngosi ihe ngosi.
La Ụlọ nsọ Cour du na -ejikọ na rue du Consulat site n'okporo ụzọ na ọ bụ windo gara aga: ụlọ ndị nwere elu osisi, ụlọ nkeonwe wuru na konkiri, art veranda, arches, Renaissance style steepụ ... Ọ bụ a okporo ụzọ na -agafe agafe dị jụụ maka ịnụ ụtọ n'ehihie oge ọkọchị.
N'ụzọ doro anya, ihe na-adịghị ụkọ na Europe n'ozuzu bụ ụka na ụlọ ụka ya mere na Limoge enwere ọtụtụ: Katidral Saint-Etienne Gothic style nke were narị afọ isii na-ewu, na Crypt nke Saint Martial na abbey malitere na narị afọ nke XNUMX, Chọọchị Saint Michel des Lions na Chọọchị Saint PIerre du Queyroix, dịka ọmụmaatụ, nke ọ bụla nwere akụ ya.
El Ahịa Limoges Ọ bụ ihe magburu onwe ya, saịtị wuru na njedebe nke narị afọ nke 1200, nke nwere ọtụtụ ígwè dị ka ejiri ya mee ihe mgbe ahụ, nke ọma na ụdị ụlọ Eiffel. O nwere mgbidi dị na mpụga nke mita 328 nke brik na -enweghị otu ogidi, ihe osise nke ejiri taịlị 6 porcelain mee, nke ọ bụla dị iche na ibe ya, na -anọchite anya ihe niile a na -ere n'ahịa: okooko osisi, azụ, egwuregwu ... N'ime ya bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ abụọ mara mma. Ị nwere ike ịga site na Mọnde ruo Satọde site n'elekere isii nke ụtụtụ ruo elekere abụọ nke abalị na Sọnde site n'elekere asaa nke ụtụtụ ruo elekere 2 nke abalị.
N'ikpeazụ, karịa ihe ị ga-ahụ na Limoges, kedu ihe ị ga -eme? Ị nwere ike gaa ịzụ ahịa, nwaa nri mpaghara, debanye aha maka njegharị ndị eduzi, na-awụli elu na hop na bọs, ụgbọ oloko mara ezigbo mma karịa ụgbọ ala ma ọ bụ kparịta ụka ma soro onye agbata obi si Limoges kparịta ụka nke ahụ ga-egosi gị ihe kacha mma n'obodo ya ...
Na, iji chekwaa ntakịrị ị nwere n'aka gị Ime obodo Limoges nke na -emepe ọnụ ụzọ maka ọtụtụ ihe nkiri n'ụdị atọ: 24, 48 ma ọ bụ 72 awa. Ọ na -agbakwunye iji ụgbọ ala na igwe kwụ otu ebe n'efu yana na -enye ego na ụlọ ahịa 75.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Francia » Ihe ị ga-ahụ na Limoges
Ihe ị ga-eme na La Palma n'agbanyeghị nkume mgbawa ugwu
Obodo mara mma nke Obodo Valencian